Etiôpia : Mpanjakavavin’ny Saba, vita dika Frantsay koa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Marsa 2008 13:25 GMT
Tamin'ity herinandro ity, ny blaogy amin'ny teny Frantsay Roots and Culture (Faka sy kolontsaina) dia nitafatafa [FR] tamin'ingahy Samuel Malher, manampahaizana mpikaroka ara-pivavahana any Strasbourg, Frantsa izay nanatanteraka ny dikanteny manontolo amin'ny teny Frantsay voalohany ny boky “Kebra Negast”, izay soratra masina eo imason'ireo Etiôpiana.
Ny Kebra Negast na “Voninahitr'ireo Mpanjaka” dia heverina ho soratra masina tsy eo imason'ireo Kristiana Ôrtôdôksa Etiôpiana ihany izay saiky ho 65%-n'ny mponina, fa ireo Rastafariana (Rastafaris) any Jamaïka koa izay mihevitra fa io boky io dia mifono faminaniana izay manambara fa ny Mpanjaka Etiôpiana farany dia “andriamanitra tonga nofo.” Ity boky ity dia manazava ny firazànan'ireo mpanjaka Etiôpiana, izay ambara fa taranaka mivantan'i Menelik, zanaky Solomona Mpanjakan'i Israely sy ny Mpanjakavavy Etiôpiana Makeda, izay maro mpahalala koa amin'ny anarana hoe Mpanjakavavin'ny Saba. Mitantara koa ity boky ity ny fomba namindrana ny fiaran'ny Vavolombelona [Ark of the Covenant | Arche de l'Alliance] ho any Etiôpia avy any Israely, ka nanjary ny Etiôpiana indray no nanjary firenena “nofidian'Andriamanitra”.
Ankehitriny, mahasarika ireo mpikaroka sy mpanao gazety maro ny “fiaran'ny vavolombelona” fa arovan'ny Fiangonana Ôrtôdôksa Ethiopiana ho toy ny “anak'andriamaso” ao amin'ny katedraly Masina Marian'i Ziona.
Toy ireo soratra maro tsy voafidy ho isan'ny Baiboly, ny Kebra Negast dia tsy voatazona ho isan'ireo horaketina ao anaty Baiboly ary maromaro aza ireo dika mitovy izay nodoran'ny Fiangonana [Erôpeana].
« Mitovy tantara amin'ireo lahatsoratra “Apokryfa” ihany izy ity. Isan'ny vaindohan-draharahan'ny Fiangonana hatrizay hatrizay ny hitazona lahatsoratra voafantina izay iaraha-mahalala amin'ny anarana hoe Baiboly [ankehitriny]. Maro tokoa ireo lahatsoratra Apokryfa izay navela, izay tsy nifanaraka tamin'izay foto-kevitra nofidian'ny Fiangonana hapetraka, ary zary tsy fantatr'ireo Kristiana akory izay fisiany. Misy amin'izy ireny mitatitra ny tantaran'ny fiainan'i Jesosy [tety an-tany], ny fiainana mpaminany iray, ny fiainan'izay Razambe iray izay mampiharihary ny fahalemana maha-olombelona azy ireny lehilahy sy vehivavy ireny, ny Fiangonana anefa izay Andriamanitra miteny [amin'ny olona], ny fahamarinany no tiany hampahafantarina … misy antony mitombon ny fanapaha-kevitra ny amelana ireny lahatsoratra Apokryfa ireny. »
Nanontanian'ny Roots and Culture koa i Malher momba ny tioeran'i Haile Selassie I, Emperoran'i Ethiopia nanomboka tamin'ny 1930 ka hatramin'ny 1974, izay heverin'ireo [mpanaraka fivavahana] Rastafariana ho andriamanitra ety an-tany. Toherin'i Malher izany fomba fivehitra izany, satria hoy izy, ny fitahiana fonosin'ny Kebra Negast dia hoamin'ireo mpanjaka rehetra mitondra an'i Ethiopia, fa tsy olon-tokana irery ihany.
Tamin'ny taona 1915 no nanontana ny dikanteny Frantsay farany ny Kebra Negast, izay nahitana andininy folo monja izay nofidiana arak'izao fomba fihevitra izao “ireo zavatra tena mampihetsi-po tamin'ny fihaonana tamin'ny Mpanajakavavin'i Saba.” Tsy tanteraka ny dikasoratra nataony ny Ge'ez izay fiteny Ethiopiana fahiny .
Vakio amin'ny teny Frantsay, ny tafatafa manontolo nandraisan'i Mahler anjara ao amin'ny blaogin'ny Roots and Culture.